Shiinaha oo xididada u siibay idaacada BBC oo been abuur weyn lagu helay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Shiinaha oo xididada u siibay idaacada BBC oo been abuur weyn lagu helay
Hay’ada u qaabilsan warbaahinta dibedda ayaa hilfaha u qaaday idaacada BBC oo lagu helay warar been abuura oo xaqiiqda ka fog sida in Shiinuhu dhacayo Taywaan iyo Muslimiinta Ugaar la yiraa ee qabiilka Terkida.
”Waxaan idaacadan beenta lagu yaqaano iyo isku darka bulshada aan ku helnay in ka badan tobaneeyo been abuura oo ka fog run sheegnimada iyo xaqiiqda jirta, taas oo sumcada ka dileysa qaranka Shiinaha ayaa algu yiri warbixinta.
Waxaan caalamka u direynaa in Shiinuhu aanu u dulqaadan doonin war abuur beena waana astaamaha lagu yaqaano idaacadaas BEEN BEEN SII ayaa la raaciyay.
Shiinuhu maaha dalkii ugu horeeyay ee saaxada ka saara been been sii oo faafisa gaalnimada iyo hantigoosadka oo ah dhaqan aad u xun. BeenBeen Sii ayaa sheegtay inay ka xuntahay go’aanka khadka looga saaray Shiinaha, waxayna sheegtay inay si tafaftiran warka u gudbiso, laakiinse been qabtey.